Industrial Kwezvokudya Nemiti Gas - China Qingdao Industry Gastec
Industrial Kwezvokudya Nemiti Gas
okisijeni gasi (okisijeni compressed)
Okisijeni iri kugadzirwa nendege separation.The kuchena ndiko 99,5% .After pambiru-kubudiswa, mukugadzira 99,99% kuchena oxygen.
Okisijeni gasi kuchena tinorupa:
chakachena High kuchena Super yakakwirira kuchena
Okisijeni inoshandiswa zvokurapa mafomu, simbi nokuveza uye nomoto, somunhu oxidizer mu chitundumuseremusere mafuta, uye mvura treatment.Oxygen rinoshandiswa oxyacetylene nomoto unopfuta acetylene pamwe O2 chokubudisa kwazvo murazvo. In iyi, masendimita simbi kusvika 60 gobvu iri kutanga neshungu duku oxy-acetylene rimi uye nokukurumidza akatema neboka guru karwizi O2.
Hatina mberi humburumbira kukurukurwa zvokushandisa, mumwe-nguva kudziyisa kubvisa mwando, Vacuum nezvimwewo work.We vane gasi yokuzvinatsa equipment.So kuchena yakachena gasi iri 99,999% muna humburumbira.
kunze dhayamita chinzvimbo Gas chinzvimbo patani urefu uremu WP TP zvinhu
Previous: fekitari Yakanyanya-kutengesa Seamless Simbi CO2 Gasi